Ndeipi mikana yakanakisisa yekuwana Amazon mazwi makuru?
Kana iwe uchishambadzira bhizinesi rako kuAmazon, zvinokosha kuti uite zvakanyatsotsvakurudza mazwi ezvinyorwa. Izvo zvakanyanya kutsvaga kutsvaga mazwi aunowana, iyo yakakwirira iwe uchatonga pa Amazon SERP uye iyo yakawanda yemigwagwa iyo iwe uchanakidza. Kudza mari yako nguva yekuongorora mazita ekutsvaga zvakakosha mu niche yako inogona kuwedzera kukwanisa kwebhizimisi rako uye kusimudza maitiro ako maitiro kune mamwe mabhuku anotsvaga ma Amazon. Zvisinei, hazvina kukwana kungoona zvakakodzera zvebhizimisi rako kutsvaga mazwi; iwe unoda zvakare kugadzirira kushandisa. Amazon inokupa iwe mukana uyu - for yarn dyed.
Kune zvikamu zvitanhatu kana iwe unogona kuisa mazita ako ezvinyorwa-musoro, tsanangudzo uye zvinyorwa zvebhuruti. Zvinhu izvi zvose zvinokosha pane imwe nzvimbo, asi zvakakosha uye zvakasvibiswa pane zvekunyorwa ndeye musoro wechibereko. Icho chinonyanya kukoshesa simba rekunyora. Kana iwe une shoko guru-rakazadza zita, iwe uchakwanisa kutarisana nemibvunzo yakawanda yekutsvaga. Zvichida iwe wakataura nezvekugadzirwa kwezvinyorwa neiyo nguva yakareba uye yakakosha yakagadzirwa nemazita mazita kuAmazon. Sezvo mutemo, mazita akadaro anotarisa zviri nani kuAmazon kupfuura zvishoma uye zvakananga. Pano tinogona kuona kusiyana kukuru pakati peAmazon neGoogle optimization zvinhu. Kunyange uri paGoogle zita rako rinofanira kunge rakanyatsojeka uye ratidza kuti iwe webhusaiti yekutanga mazano, paAmazon zita rako rinoshumira kupa huwandu hwakawanda pamusoro pezvibereko zvako sezvinobvira. Vashandi havatauri semitemo yakareba, asi Amazon A9 ggorithm inogona kuwana kukosha mairi. Saka, nemashoko anokosha-mazita, zvigadzirwa zvako zvichave zvakanyatsotarirwa pamashoko akasiyana-siyana ekutsvaga.
Kunyange zvazvo vane musoro mukuru unokosha, iyo inongova hafu yehondo. Kana iwe uchida kuzadzisa nzvimbo yakakwirira kune ipi zvayo inotsvaga kutsvaga mazwi, kutengesa kunofanira kutungamirirwa nehuwandu hwekuratidza Amazon kuti chigadzirwa chako chinonyanya kukosha pamashoko aya ekutsvaga. Ndicho chikonzero munyaya ino tichakurukura kuti tingagadzira sei izwi rekutsvakurudza mune unyanzvi uye kuti Amazon yako inyore zvakanyanya sezvinobvira..
Amazon keyword research and list optimization
Maererano nehuwandu hwemashoko, chechitatu chezvinhu zvose zvinotsvakurudza zvinotanga pa Amazon trading trading platform. Icho chakanyanyisa uye chinokwikwidzana nemamiriyoni ezvimwe zvakasiyana-siyana. Ndokusaka iyo isiri nzvimbo yakanakisisa yekuona uye kuwana zvitsva zvitsva. Amazon tsvakiriro inotarisira kuti zvigumisiro zvinowanikwa pane mibvunzo ine urongwa hwezvinhu zvakakosha uye zvakakodzera. Ndiko kusaka zvakakosha kuonekwa pamusoro pezveruzhinji apo vashandi venyu vanogona kutsvaga chero mutsara unobatanidzwa nechigadzirwa chako.
Mitemo yakawanda inokosha inogona kukubatsira kuti uone zvakanyanya mumatsva ekutsvaga maAmazon, kusanganisira huwandu uye huwandu hwehuongorudzo dzako, Amazon yako yekutsvaga nhoroondo, nhamba yezvakanaka zvekutengesa, nyeredzi yevashandi, rubatsiro rwevatengi, uye zvakakosha sei iri kumhinduro yekutsvaga. Kunyange zvazvo zvizhinji zvezvinhu izvi zvinoda nguva uye zvakakosha, ma Amazon yako ekugadzirisa maitiro anogona kuva pakarepo mukutonga kwako.
Nzira yekuwana sei mazwi ema Amazon ekugadzirisa?
Kune dzimwe nzira dzakawanda dzekuwana mazwi chaiwo aunofanira kuisa pane yako mazita kuti uwedzere kufanana kwako kwemashoko ekutsvaga anowanzobvunzwa.
Pane nzira mbiri dzingaita sei kuti uite kutsvakurudza mashoko ezvinyorwa - zvinyorwa uye zvakananga. Kusiyana kwekupedzisira ndiyo inonyanya kushandiswa mumazuva edu nokuti inochengetedza nguva yakawanda yakawanda uye inopa mhinduro yakarurama yakabva pamusana wekutsvaga misika yekutsvaga uye kukwikwidzana nekuongorora.
Ndicho chikonzero ndinokukurudzira kuti usarudze unyanzvi hwekugadzira software kuti ubudirire kubudirira muAmerica. Kubva kune inonyanya kushandisa keyword tsvakurudzo, ndinokwanisa kuverenga zvinotevera - Google Keyword Planner, Amazon Keyword Planner uye Jungle Scout.